Android: maitiro ekuchinja yako dhizaini yekutsikisa maitiro (yakatwasuka kana yakatwasuka)
Kuru Nhau & Ongororo Android: Ungachinja sei dhizaini yako yekudhirowa kutarisa (yakatwasuka kana yakatwasuka)
Android: Ungachinja sei dhizaini yako yekudhirowa kutarisa (yakatwasuka kana yakatwasuka)
Vazhinji vashandisi veApple vanoita kunge chaizvo semadhirowa eapp , sezvo ivo vachipa inokurumidza uye yakapusa nzira yekufungidzira ese maapplication akaiswa pafoni kana piritsi. Nekudaro, ndeapi madhiraidhi eapps asingapi ndiko kugona kusarudza kupuruzira nzira. Semuenzaniso, kana iwe uine yako Nexus (kana chimwe chishandiso chinomhanyisa stock Android 6.0 Marshmallow) uye iwe ukashandisa Google Now launcher, unogona kungopururudzira wakamira mudhiri reapp. Kana iwe uine yako Samsung Galaxy, uye iwe & apos; unoshandisa zvakare Samsung & apos; s default launcher, iwe & apos; uchaona kuti iwe unogona kungotenderera wakatsetseka. Saka, chii iwe chaungaite kuti uve nesarudzo yekupuruzira kungave yakatwasuka, kana yakatwasuka? Zvakanaka, iwe unogona kuisa yechitatu-bato kuvhura iyo inopa zvese zvingasarudzwa, zvisinei kuti ndeipi Android mudziyo iwe yaunogona kuve nayo.
Kune akasiyana matatu echitatu mabhenji ayo anoratidza ese maappuro edhirowa ekutsikisa sarudzo, asi, pachinyorwa chino, isu & apos; tichashandisa Nova Launcher - imwe yeanokosheswa Android maruneti kunze uko. Nova Launcher ine yemahara uye yePrime (yakabhadharwa) vhezheni, asi iwe unogona kungotora iyo yemahara pane izvo zvatinoda pano - tora pasi kuburikidza neGoogle Play kubva pane iyi link inowanikwa pakupera kwechinyorwa chino.
Mushure mekurodha pasi Nova Launcher, chiite yako default default. Wobva wadzvanya kwese kwese pachiratidziro chekumba (pane chero Wallpaper raungave uine) kuratidza iyo Launcher & apos; s Zvirongwa bhatani. Mune iyo Zvirongwa menyu, tsvaga iyo App & widget dhirowa tebhu uye tinya pairi. Tevere, kubaya paApp dhirowa dhizaini tabu, uye iwe & apos; uchakwanisa kusarudza pakati yakatwasuka (kubva kuruboshwe kuenda kurudyi) uye yakamira (kubva kumusoro kusvika pasi) kupuruzira. Iko & apos; s zvakare Rondedzero sarudzo, asi izvi zvakare zvinoreva kutwasuka kutwasuka. Pasina mubvunzo kutaura, iwe unogona kuchinja pakati peaya masitaera pese paunonzwa kuda izvozvo.
Ungachinja sei dhizaini yako yekudhirowa kutarisa pamusoro peAroid
download: Nova Launcher (mahara)
metro pcs zte zmax yeuka
mutsauko pakati pekuisa uye chigamba
Samsung Galaxy S7 Edge inobata pamoto mushure mekutonhora uye nekuvhara
iPhone charger inobata moto, ichisiya musikana & apos; chiso chakatsva
Akanakisa asina waya mahedhifoni ekutenga mu2020
Yekupedzisira Yekufungidzira XV Pocket Edition yakatangwa pa Android uye iOS
Maitiro ekuchinja kana kudzima SIM PIN pane yako LG G4
HQ Trivia: kutamba sei, kuhwina, uye maitiro ekuita mari chaiyo
Nekuda kweT-Mobile uye AT & T, US 5G ichiri kusaririra kumashure kweWi-Fi maererano nekumhanya
Maitiro ekuvanza maapps pane yako Android foni